यसरि भयो अस्ट्रेलियामा एक नेपालीको दुखद निधन ! — SuchanaKendra.Com
यसरि भयो अस्ट्रेलियामा एक नेपालीको दुखद निधन !
अष्ट्रेलिया : अस्ट्रेलियामा पारिवारिक बिवा’द हुँदा श्रीमानको निधन भएको छ। सिड्नीको ग्रा’न्भिलमा श्रीमान श्रीमातीको घरमा बि’वाद हुँदा श्रीमानको नि’धन भएको हो ।
नि’धन हुने नेपाली मुलका रहेको र श्रीमतीले हति,. प्रयोग गरि बुटवल निवासी सन्तोष गौतम (३४) को निधन भएको गैरआवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष देव गुरुङले पुष्टी गरे।
। संलग्न रहेको आरोपमा उनकै श्रीमती ३४ वर्षकी निमा गौतमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरु सिड्नीस्थित ग्रानभिलमा बस्दै आएका थिए । केहिसमय अघिदेखि पारिवारिक रुपमा बिवाद रहेका उनीहरुबीच परिस्थिति बिग्रँदै जाँदा झड. स्थिति भएको थियो ।
एनएसडब्लु प्रहरीका अनुसार शनिबार बेलुका ग्रा;नभिलको घरमा घटना भएपछि घा’ईते भएका ३४ बर्षका युवालाई पा’रामेडि’क्सले स्थानीय वेष्टमिड अस्पताल पुर्‍याएका थिए । उनको उपचारका क्रममा नि’धन भएको हो । घा’इते अवस्थामा रहेकी श्रीमतीलाई पनि उपचार गराएर ग्रा’नभिल प्रहरी चौकीमा उपस्थित गराइएको थियो ।
स्थानीय प्रहरीले यस घटनालाई घरेलु रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीमाथी मु;द्दा दा’यर गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ । एनएसडब्लु प्रहरी फोर्सले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार उनलाई आज पारामाटा अदालतमा पेश गरिने छ।